Dokam-barotra ao amin’ny sokajy personals in USA
Mike, dia miaina ao Paris akaikin’ny metro, raha tsy misy ny ara-nofo sy ny trano fonenana olana, tsara tia vazivazy, sahaza, marina, be fitiavana biby, dia miasa ho toy ny mpiambina ao amin’ny birao ny lalàna mafy. Ny olona rehetra toy ny boky, ary ny mamaky azy isika. Ny olona iray ho iray volana, dia nisy olona roa. Ny olona iray rehefa afa-tsy taona hahatakatra ny olona tsy mamaky ity hatramin’izay. Vehivavy mpitsabo mandeha amin’ny tehina, Fialam-boly no psikolojia, dobo filomanosana, trano fisotroana kafe, mandeha ao Sokolniki, tantara an-tsehatra, dihy, sns. Mitady mpiara-mitovy taona sy ny tombontsoa ho an’ny mpiray fialam-boly ny asa. Mandeha mamakivaky ny fiainana miaraka mandrakariva amin’ny hafaliana sy ny alahelo. taona.
Dia hihaona mahafinaritra ny vehivavy avy any an-tanàna rehetra vonona hanorina fifandraisana sy miara-miaina. Tiako ny hihaona zazavavy tsara tarehy ny eo ho eo ny taona ka ny tanjona dia ny mamorona ny fianakaviana iray ary miara-monina amiko. Raha toa ka tsy avy ao Washington no tena tsara. Mitady ny olona mavitrika, tsara liana amin’ny fomba fiaina ara-pahasalamana. Fitiavana ny fifandraisana amin’ny olona. Misokatra ho an’ny zava-drehetra vaovao izay afaka hanatsarana ny fiainana sy ny hanangana sehatra vaovao ho an’ny fitomboana. Ndeha isika hiasa miaraka mba ho tsara kokoa ny fiainany dia miara -. taona.
Zazavavy mitady lehilahy ho an’ny fanambadiana te lehilahy malemy fanahy, be fiahiana ny tantaram-pitiavana aho roa-polo taona, raha tsy misy fahazaran-dratsy Muscovite. taona.
Muscovite, amin’ny tsara vatana sy tsara endrika ara-batana. Mitady vehivavy iray avy any ETAZONIA faha-dimam-polo taona, be fitiavana rehefa manao ny otra. Ny hahavony, lanja, fihodirana dia afaka ny ho na inona na inona. Ny antsipirihany ao amin’ny taratasy.
Salama tsara tarehy mbola tamiko ny olon-kafa.
Mamela ahy mba hampahafantatra ny tenako aho, no anarako, Ivan, izaho efapolo taona, Muscovite, ny tokan-tena, tsy manan-janaka, ny fitomboana zato ary ny fito-polo santimetatra, lanja valopolo kilao, miaraka amin’ny toaka olana tsy efa tsara, hatsaram-panahy feno sy ny fitiavana, afaka mihaino.
Mahaliana, manifinify, mahaleotena, amin’ny vazivazy sy ny isan-karazany ny zavatra mahaliana. Nisara-panambadiana tsy misy ankizy. Mipetraka any Israely. Amin’ny fomba iray na hafa manana ireo toetra mba hitady olona. Jereo ny mpiara-miasa ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana
← Ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny rosiana ny ankizivavy
Maimaim-poana Niaraka vehivavy | Mampiaraka "Mampiaraka ny vehivavy" →